Nanomboka tamin'ny 2017 dia nanomboka nanao fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra charger PD GaN i Staba.
GaN tech dia revolisionan'ny indostrian'ny charger, ity charger ity dia afaka mampiasa transformer kely kokoa sy singa inductive hafa, amin'izay mampihena ny haben'ny charger GaN sy ny famokarana hafanana, ary ny fanatsarana ny fahombiazany.
Mandritra izany fotoana izany dia ampidiro hatrany ny fitaovana famokarana mandeha ho azy tato ho ato, tsy mampihena ny vidin'ny asa fotsiny, mampitombo ny vokatra, fa manatsara ny fifaninanana vidin'ny charger an'ny rindrin'ny Staba PD, ary manatsara ny kalitaon'ny avo lenta amin'ny teknolojia mandeha ho azy; fampidirana ny rafitra fanandramana mandeha ho azy farany sy ny rafitra fahanterana, mampihena ny vidin'ny mpiasa, manatsara ny kalitaon'ny charger PD usb ho an'ny sehatra iraisam-pirenena, mahatratra PPM ny tahan'ny tsy fahombiazan'ny vokatra.
Nandritra ny fivoarana dia nandinika tsara ny fanangonana ny zon'ny fananana ara-tsaina sy ny fametrahana ny rafitra fitantanana orinasa i Staba. Staba no orinasa voalohany eto amin'ny faritra misy anay izay nandany ny fankatoavana ny IPMS an'ny GB / T29490-2013, manana patanty famoronana 4 tany Etazonia sy tany amin'ny Vondrona eropeana, ary mihoatra ny 58 ireo patanty famoronana tany Sina tany am-boalohany sy ireo patanty modely azo ampiasaina.
Staba dia nankatoavina / nekena indray ho orinasa teknolojia avo lenta intelo nisesy, manana ivon-teknolojia roa izahay: Ivon-toerana teknolojika momba ny herinaratra momba ny herinaratra ao amin'ny faritanin'i Guangdong, ary ivon-toerana teknolojika momba ny herinaratra any Zhongshan. Hatramin'ny andro voalohany niorenany, ny rafitry ny rindrambaiko ERP sy ny rafitra fitantanana ISO9001 dia nampiharina tamin'ny lafiny rehetra amin'ny fitantanana orinasa, miantoka ny fandefasana sy ny fahombiazan'ny rafitra. Amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa 340 izahay, ka ny 33 amin'ireo dia ho an'ny rafitra R&D ary 38 ho an'ny rafitra fitantanana orinasa. Mandritra izany fotoana izany dia manana fiaraha-miasa matotra sy fiaraha-miasa amin'ny consultative amin'ireo andrimpanjakana fikarohana sy manampahaizana manokana amin'ny indostria izahay, manandrana manao ny vokatray, ny serivisy ary ny haitao eo alohan'ilay indostria.
Staba dia te-hamorona tombam-bidy win-win miaraka amin'ny mpanjifa amin'ny kalitao avo, ny vidin'ny fifaninanana, ny fotoana fitarihana haingana ary ny fanampiana.
Fahombiazana Ny maodely azo antoka na fahavelomana maharitra indrindra eto an-tany
Fanavaozana Ny votoatin'ny fanavaozana dia ny fiahiahiana ny mahaolona sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa
Ny fo voalohany Mankasitraka ny mpanjifa no zava-dehibe indrindra, ny fitomboantsika dia tsy azo sarahina amin'ireo mpanjifa